I-horoscope yaminyaka yonke yomdlavuza we-2011
Esihlokweni esithi "I-horoscope yaminyaka yonke yomdlavuza we-2011" sizokutshela ukuthi yikuphi okuzoba yi-horoscope ye-Cancer. Ukuqala konyaka ku-horoscope ka-2011 kuzobekwa uphawu uxhumano emaRaks of Jupiter nase-Uranus, kuzokwenza kube nemiphumela ethakazelisayo yobudlelwano nabangaphandle, kungenzeka ukuthi uhambo olude. Hamba uye phezulu, usebenze kanzima, futhi ohlangothini lwakho kuyoba nezinkanyezi. I-Jupiter ibuya, ekupheleni kukaJanuwari 2011 futhi kuze kube sekuqaleni kwehlobo uzobe ukhuthazwa yintuthuko yomphakathi kanye nempumelelo yomsebenzi.
Kumakhansela, kuzobe kunenkinga enjalo njengomsebenzi wendlu. Uzokwazi ukungena esimweni sokulwa namalungu omndeni, nomlingani emshadweni, uma usulungele ukuwuphula, bese uyakha kabusha. Udinga ukuqonda ukuthi yikuphi ukushintshwa kwamakhadikhadi okudingekayo, nokuthi ungaphila ngokuphumelelayo kumaphrojekthi wekhaya noma emsebenzini. Ungakwazi ukunquma ngokulungiswa okukhulu nokuvuselelwa endlini, uye ekuvuseleleni imisebenzi yakho yobuchwepheshe bese udala isu lempumelelo yakho.
Ukuphila ngeke kukuvumele ukuba uthathe umhlalaphansi unomphela futhi unciphise umbuthano wokuxhumana nalabo ojwayele, ngeke kukuvumele ukhululeke isikhathi eside futhi ukhethe amakilasi ngendlela oyithandayo. U-uranium uzogcina edlule ama-Aries futhi akunike ukuphendula okukhethile. Lapho ungenayo isikhathi bese "isitimela sishayela ukudlula." Isikhathi esincane sokuguqula. Okunye ukuxhumeka kuzobe buthakathaka noma kuzoqedwa.
U-2011 uzoba ne-twist entsha futhi abuyele ebuhlotsheni. Futhi uma kunezinkinga ebuhlotsheni bomuntu siqu, ngeke bakwazi ukuhamba, kuze kube yilapho abalingani kuyo yonke imininingwane bengakwazi ukukuthola. Izinkinga zezezimali zizokuthandayo engxenyeni yesibili kaJanuwari. Uzosebenza kanzima, kodwa ufuna umsebenzi wakho ukhokhwe kahle. NgoJanuwari noFebhuwari kuzoletha ukukhathazeka ngemali yabanye abantu kanye nempahla yabanye abantu, kuyoba nesidingo sokuxazulula izinkinga zezikweleti, izikweletu, izintela.
U-Mashi uzophumelela wena ngokuzikhandla. Uzoba nomqondo oyedwa futhi unamandla, futhi ozakwabo bazokukhetha esikhundleni sezikhundla zobuholi. Futhi-ke udinga ukukhuluma nomphathi mayelana namathemba akho ngokushesha.
Ngo-Ephreli ngokwemisebenzi, futhi, ibonakala iyathakazelisa, futhi kuzodingeka ukhethe noma umsebenzi omdala wokusebenza, noma umsebenzi omusha wekusasa. Mhlawumbe ufuna ukuhlanganisa izinhlelo ezintsha nemisebenzi endala.
Ngaphakathi entwasahlobo, sizokhuluma ngezinguquko ezinkulu ekhaya. Lesi yisikhathi esifanele sokuqala ukulungiswa okukhulu endlini nokushintshanisa izindlu.
Kwangathi kungaba yisikhathi esithakazelisayo nesomatasa. Abantu abasha abajwayele ukufunda nabo bazoqala futhi abangane abadala bazokukhumbula. Amaphupho amasha, amapulani, ukubonakala, izinhlelo kanye nemibono kuzoshintshashintsha, kukhuthaze impumelelo entsha futhi kukucebisa ngolwazi olusha. Esikhathini sothando sphere, isimo sizoshintsha ukuze kube ngcono. Uzoqonda ukuthi ubani othanda ngempela.
Ngo-Juni, udinga ukuhlela isikhathi sokuphumula, ngoJulayi uzobe ulindele ukuguqulwa kwesiphetho, udinga ukuqaphela konke okwenzekayo, kodwa kuyoba ngcono ukuqondisa nokulawula inqubo. Imisebenzi oyibekayo ngonyaka odlule izokuyeka ukukunelisa ngalonyaka, futhi uzofuna ukuwashintsha. Kungase kungathandi abalingani bakho, ngoba bayabheka ngokubamba iqhaza kwakho. Lezi zinkinga kuzodingeka zibhekane nazo ngoJulayi kuze kube yingxenye yokuqala ka-Agasti, kunethemba elinjalo lokuthi uzoxazulula konke ngasekupheleni kwehlobo. Futhi ngoJulayi no-Agasti ezinye izindaba ezibonakalayo ziyonqunywa. Ngeke kwenzeke ngaphandle kwezihlobo ezindala futhi ngaphandle kosizo lwabo, uma unquma ukwenza inzuzo enkulu.
USepthemba uzokuletha inqubekela phambili ebhizinisini, oxhumana nabo abasha bazovela ukuthi kuzoba usizo emibhalweni yebhizinisi. Uzodinga ukuxhumana, ibhizinisi, ukuhamba nokuphumelela kuzovezwa kakade ngo-Okthoba. Ekupheleni kukaSeptemba, izinkinga zomndeni zizokukhohlwa ezinye izinto, futhi kungcono ukubhekana nezinkinga zomndeni ngaphandle kokulibala.
Ephakathi kwekwindla indawo amaplanethi izosho ukuthi kubalulekile ukufinyelela ezingeni elisha ngendlela yomuntu siqu, yokudala neyomsebenzi. Uzozwa ukwaneliseka empilweni, uma ungesabi ukuthatha izindawo eziphakeme, ngisho noma kubonakala kungenakwenzeka kuwe. NgoNovemba uzoqonda ukuthi konke okusemandleni akho, nokuthi udinga ukucabangela ngamanye amapulani. NgoNovemba kuhle ukulungisa ukubuyisana kanye nobuhlobo bomuntu siqu, uma kunesidingo. Izinqumo ozithatha ngokuhlanganyela zizosiza ukuletha izinkinga zakho ezingeni elisha ezingeni elisha.
Ukuphela konyaka kuzoba yimpumelelo nokuthula. Emsebenzini kuyoba nokukhuthazwa, impilo yomndeni izokujabulisa, futhi ezinye izinto ngeke zilethe inkathazo enkulu.
Love horoscope for Cancers ngo-2011
I-Horoscope ye-Cancer nge-semester engu-1
Amakhansela engxenyeni yokuqala ka-2011 ayojabula. Ukuqala konyaka kuzoba ngaphansi kwethonya elizuzisayo lamaplanethi, okuyinto enesibopho sobudlelwano bothando. I-Cancers yomndeni ekugcineni iyoqiniseka ngokuzikhethela kwayo, izodumisa umlingani wayo, futhi izoziqhenya ngesigamu sabo sesibili. Ngokufanayo uzophendulwa yoshade naye, okuyinto ezoba mnandi kakhulu.
Yiqiniso, entwasahlobo, i-Cancer ingaphazamisa konke. Omunye ovela kubamele belibonakaliso uzokufuna, ezinye ezihlukahlukene ngemizwa, futhi engcono kunomhawu, abaningi abakhuphuli lutho. Umnikazi waleso simo kuphela oyohlala isikhathi eside. Uzakwethu unesivunguvungu angenza ukuthi udinge ukukhombisa ukuzinza, ukuze ungacasuli ngalokhu futhi ungalahlekelwa imizwa yethando kumlingani wakho.
Abamele bodwa beKhansela engxenyeni yokuqala ka-2011, bangakwazi ukuhlangabezana nomuntu onjalo, njengoba kubonakala kubonwe kubo. Konke kuqala ngethando elithandayo. Futhi isizinda se-hormonal sizohlela ukuhlangana okunjalo okujabulisayo ukuthi abamele isibonakaliso se-Zodiac bazoqonda ukuthi kungani uthando lubhekwa njengesifo. Njengoba ubuhlobo buqala, amaKhansela azoqonda ukuthi ayamthanda ngempela okhethiweyo, nokuthi ukukhanga akuyona nje ukubukeka okuhle.
Uma umuntu engenanhlanhla okwanele ukuhlangabezana nalowo oyithandayo, kufanele aqiniseke ukuthi ngeke ahlale engenakunakekelwa. Ngaphambi kwehlobo, bazoba nesikhathi sokungena esikhundleni somlingani oyedwa, kodwa ngaso sonke isikhathi bayoba nomuzwa wokunganeliseki. Kubonakala sengathi izibambiso ezinhle kakhulu zenziwe kakade, kodwa kuphela i-Raki eye yalahlwa. Futhi lesi simiso sizobe sihleli uma amaKhansela ayeka ukuzama ukwenza ulwazi olusha futhi ayeke kulokhu.
I-Horoscope ye-Cancer iminyaka emibili yonyaka
Engxenyeni yesibili ka-2011, kuzoba nezizathu eziningi zemicimbi emisha namaKhansela wamahhala. Amakhosikazi angashadile azokwazi ukubhekana nezinselele zothando nokuthakazelisayo, futhi nakuba kungadingeki ukuba baqede ukugcwalisa le adventure ngomshado, kodwa nokho kuzokhunjulwa isikhathi eside futhi kuzoba kuhle. Kakade ngasekupheleni kuka-2011, i-Cancer izoqonda ukuthi abalingani bokudlala ngothando akufanelekile emndenini, futhi bangamisa noma baqhubeke lezi zanveli ezingabophi.
Abamele umndeni weKhansela bazoba phakathi kwesikhathi lapho ukuzinza kwesimo kuzoba khona. Wena ngokwakho ungakha impilo yomndeni wakho, uneliswe yilokho sikhundla kanye nokuvumelana okudalwe.
Ekupheleni konyaka isimo sizodlula ngokuphelele ezandleni zomlingani. Uma ebona kakhulu, ukukhanga kanye nokuthandana komunye nomunye kuyohlale kuyinto ebalulekile ebuhlotsheni babo. Ngesikhathi esifanayo, ukunganaki nobuvila engxenyeni yomlingani kuzobadedisa kude neKhansela ethandekayo, futhi kungase kuvele ukuthi uNyaka Omusha uzohlangatshezwa ngabashadile ngokuhlukile. Futhi ayikho iphuzu ekusola amaKhansela, ngoba phakathi nalesi sikhathi amandla enzwa ayadingeka, wona, futhi azoheha, njengemagnet.
Manje siyazi ukuthi kufanele kube yi-horoscope yaminyaka yonke yomdlavuza we-2011. Sithemba ukuthi u-2011 uzophumelela futhi ajabule ngawe. Inhlanhla kuwe!
Isibikezelo sezinkanyezi kusukela ngoFebruwari 12
Yini iso elihle elishayolayo?
Vareniki enobuqili nge-cottage shizi
Ukuyeka ukukhathazeka: imithetho emithathu yokubhekana nokucindezeleka
Shaw, futhi? U-Anna Kalashnikova ushicilelwe ku-Instagram video nge-Prokhor Shalyapin
I-Horoscope ngo-September 2017 ye-Gemini Women
Izibonakaliso ezingu-7 zokuthanda intando
Ukuphulukisa izakhiwo ze-Senna - i-Alexandria isithombo
Umethuli we-TV ophumelelayo uSlava Frolova
Isaladi yekhukhamba ne-salmon
I-Honeymoon nemizila yezindlela ezithakazelisayo
Ungakhetha kanjani i-toothpaste efanele?
Uzoba yini ngonyaka we-2018 weNgonyama?